रौतहटमा अ चम्म ! कसरी अ चानक भासियो शिव प्रतिमा जमिनमुनि ? ​स्थानीय ड राए – PathivaraOnline
Home > धर्म सँस्कृति > रौतहटमा अ चम्म ! कसरी अ चानक भासियो शिव प्रतिमा जमिनमुनि ? ​स्थानीय ड राए
Poonam July 14, 2021 धर्म सँस्कृति	0
​रौतहटमा अ च म्म भएको छ । त्यहाँ भगवान शिवको प्रतिमूर्ति जमिनमुनि भासिएको छ । त्यो थाहा पाएर स्थानीय डराएका छन् । त्यहाँको गढीमाई नगरपालिका २ समनपुरस्थित प्राचीन शिव मन्दिरको शिव प्रतिमा जमिनमा भासिएपछि स्थानीयमा डर फैलिएको छ । दिउँसो पूजा गर्दागर्दैको अवस्थामा शिव प्रतिमा सतहभन्दा करिब डेढ फिट तल जमिनमा भासिएपछि स्थानीयवासीमा डर देखिएको हो ।
गढीमाई नगरपालिका १ समनपुरका ३६ वर्षीय पप्पु भन्ने अनिशकुमार मेहताले आइतबार दिउँसो साढे दुई बजेतिर पूजा गरिरहेको अवस्थामा नै शिव प्रतिमा भासिएको हो । भाकलअनुसार पूजा सकिएपछि शिव प्रतिमामा घीउ दल्न था ल्दा भासिएपछि आफू एक छिन डराएको र डराएर मन्दिरबाट बाहिर आई पूजा गराउने पण्डिजी, माली तथा हजामलाई सुनाउँदा तत्काल नपत्याएको बताउँदै सबैले देखेपछि विस्मित भएको मेहताको भनाइ छ ।
यस्तो खबर सुनेर मन्दिरको नजिकै घर रहेको एक महिलाले मोबाइलमा फोटो खिच्दा बेग्लै आकृति देखिएपछि गाउँमा त्रास फैलिएको हो । त्यसको फोटो खिच्दा भि त्तामा बन्द गरिएको अवस्थाका दुई आँखाको आकृति आएको देखिएको छ ।
आज जनैपूर्णिमा अर्थात् रक्षा ब न्धन ! दिन दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई रक्षा बाँ धेर मनाइन्छ
कसैलाई छोरा वा छोरी जन्माउने रहर छ? ल हेर्नुस यस्तो छ शास्त्रिय तथा बैज्ञानिक बिधि!